Akhri:– Madaxweynaha Somaliland Oo Ugu Tacsiyadeeyey Dawladda Ingiriiska Magaaladii Uu Wax Ku Bartay Oo La Qarxiyay | Saxil News Network
Akhri:– Madaxweynaha Somaliland Oo Ugu Tacsiyadeeyey Dawladda Ingiriiska Magaaladii Uu Wax Ku Bartay Oo La Qarxiyay
Hargeysa (Saxilnews) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Axmed Maxamed (Siilaanyo), ayaa cambaareeyay oo weerar bahalnimo ah ku tilmaamay qaraxii ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska Isniintii toddobaadkan.
Madaxweyne Siilaanyo oo muddo dheer ka hor wax ku soo bartay magaalada Manchester, waxa uu weerarkaas ku sifeeyay mid looga gol lahaa in lagu argagax geliyo bulshada aan waxba geysan isla markaana diin-diin la iskaga horkeeno.
Madaxweynuhu wuxuu sidaasi ku sheegay qoraal Ingiriisi ah oo uu u diray dawladda Ingiriiska iyo shacbiga Britain oo uu kaga tacsiyadeynayay weerarkaas argagixiso.
Cumar Maxamed Faarax oo ka mid ah suxufiyiinta shabakada Hadhwanaag News, ayaa qoraalkaas oo ka soo baxay xafiiska Afhayeenka iyo saxaafadda ee xarunta madaxtooyada soo turjumay waxaannu u qornaa sidan:-“Weerarkii argagixiso ee ka dhacay magaalada Manchester Isniintii 22-kii May 2017, wuxuu ahaa mid dhiilo leh oo qalbi jab ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Axmed Maxamed (Siilaanyo) iyo shacabka Somaliland, waxay si adag u cambaareynayaan weerarkaas naxdinta lahaa oo ay ku naf-waayeen dad badan oo aan waxba galabsan oo ay ku jireen carruur da’doodu ka yarayd 8 sanno jir.
Weerarkaasi wuxuu ahaa mid bahalnimo ah oo la isku dayey in lagu argagax geliyo shacabka aan waxba galabsan. Wuxuu ahaa weerar ka dhan ah bini’aadminimada iyo yuhuunta caalamka oo dhan.
Ciddii fulisay weerarkii ka dhacay Manchester, waxay uga gol lahaayeen inay daciifiyaan qiyamka dadweynaha magaaladan weyn ee ay ka jirto dimuqraadiyada iyo furfurnaanshaha ee dulqaadka leh. Waxay rabeen inay dadka iskaga horkeenaan diin-diin iyo bulsho- buslsho. Waxay jeclaayeen inay cabsi kala dhex dhigaan bulshada nabad-doon ee ilbaxa ah ee reer Manchester. Halkaas oo aan wax ku soo bartay muddo dheer ka hor.
Waxaannu u rajaynaynaa dadka reer Britain oo dhan, gaar ahaan dadweynaha reer Manchester oo aanu la wadaagaynaa tacsiyad qalbiga ka soo go’day oo aanu gaadhsiinayno dadka Ingiriiska, dawladda Britain gaar ahaan dhibaneyaashii weerarkaas argagixiso khasaaruhu ka soo gaadhay iyo qoysaskoodaba.”
Weerarkaas waxa dawladda Ingiriisku shaacisay inuu fuliyay Salmaan Abedi oo ku dhashay Ingiriiska, hase ahaatee ka soo jeeda dalka Liibiya.